बिहे नगरी बा बन्न चाहिँ पाउने कि नपाउने ? | suryakhabar.com
Home विचार/ब्लग बिहे नगरी बा बन्न चाहिँ पाउने कि नपाउने ?
on: २२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:०६ In: विचार/ब्लगTags: No Comments
विमल नेपाल/काठमाडौं । कुनै पनि नारीले बिहे नगरी आमा बन्न पाउने गरी कानुन बनेसँगै समाजमा अनेकथरी बहस सुरु भएको छ । विश्वका विभिन्न देशहरुमा प्रचलनमा आइसकेको यो कानुन नेपालका लागि बन्दा बहसको विषय बन्नु अस्वभाविक भने होइन । किनकि, पितृसत्ताले गाँजेको देशमा महिलालाई विवाहबिना नै आमा बन्ने कानुनी अधिकार दिनु ठूलो कुरा हो ।
२२ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १४:०६